Ọnọdụ abalị na-aga n'ihu ịgbasa maka Samsung Galaxy Note 9 | Gam akporosis
Ọnọdụ abalị na-agbasawanye maka Samsung Galaxy Note 9
El 9 Galaxy Note Ọ bụ ọkọlọtọ ugbu a nke usoro ya, ọ bụ ezie na ọ bụghị ogologo oge. Ka anyị cheta na Na-esote August 7 - ụbọchị nke dị naanị ụbọchị atọ ka ọ gachara-, na Barclays Centre ọtụtụ ụlọ nzukọ egwuregwu na Brooklyn, New York, United States, 10 Galaxy Note A ga-eme ya ka ọ bụrụ onye ọrụ ka ọ bụrụ onye ama ama mara ama nwere njirimara kacha mma nke South Korea.
Igwefoto nke ngwaọrụ a na-atụ anya ga-abụ nke kachasị mma, mana ọ bụghị ya mere onye nrụpụta ga-eji eleghara Galaxy Note 9. Ihe akaebe nke a bụ mmelite emerela na ngalaba foto nke nke a site na OTA, nke na-agbakwunye ọnọdụ abalị gaa na United States.
Ka o siri dị, mmelite a abụghị ihe ọhụrụ. Samsung kwalitere ọnọdụ abalị maka Galaxy Note 9 na June, ma n’oge ahụ ọ bịara dị maka naanị ụdị German. Ọfọn, ugbu a ụlọ ọrụ agbatịwokwa atụmatụ a na US Ndị ọrụ ndị ọzọ si mba dị iche iche ka ga-eche maka atụmatụ a, nke na-aga ọtụtụ iji melite foto abalị.
Ngwunye ngwa ngwa na-abịa n'okpuru koodu mbipute N960USQU2CSGA maka 9 Galaxy Note si Verizon. Nke a na - eweta Mode Night na ngwaọrụ, yana ịtinye July 1, 2019 nche patch.
- Inweghachi ntakịrị, ekwentị nwere mkpebi abụọ MP 12 n'azụ igwefoto. Isi ihe mmetụta nwere oghere na-agbanwe agbanwe f / 1.5-2.4, oghere 26mm, pikselụ 1.4µm (micron), PDAF na teknụzụ pixel abụọ pixel, ebe nke abụọ bụ oghere telephoto nke nwere oghere f / 2.4, 52mm ihe mmetụta, pipụ pixel 1.0µm, autofocus, OIS na 2x optical mbugharị. N'ihu ya nwere onye na-agba egbe 8 MP na oghere f / 1.7.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ọnọdụ abalị na-agbasawanye maka Samsung Galaxy Note 9
Onye enyemaka Google nwere ike gụọ ozi WhatsApp, Telegram ma ọ bụ Facebook Messenger
Ihe ngosi 10 nke Galaxy ga - egosipụta ihe nhazi Exynos ohuru